Mandritra ny taona voalohany amin'ny fiainana dia mamoaka lahateny ilay zaza. Ara-dalàna raha tsy manonona tsara ny feo rehetra ny ankizy amin'ny voalohany. Fa ny ankizy voalohany dia tokony hanana fomba fitenenana madio, satria ny kabary tsara dia iray amin'ny fototry ny fianarana sy ny fampivoarana mahomby. Noho izany ny ray aman-dreny dia tokony hanara-maso akaiky ny zazakely efa any am-pianarana, ary raha 5-6 taona dia tsy manonona taratasy ny pencil, dia ilaina ny manitsy izany. Azonao atao ny manatona dokotera miteny, fa raha tsy mety izany fotoana izany, dia tokony hiezaka hanao ny asanao ianao. Matetika ny ankizy dia manonona ilay taratasy "p". Ny sasany milaza azy amin'ny teny sasany, raha ny hafa kosa dia mahatsapa izany amin'ny kabariny. Noho izany dia maro ny reny liana amin'ny fomba ampianarana ilay zaza hiteny ilay taratasy "p" ao an-trano. Izany dia mitaky faniriana, fotoana sy faharetana. Ny fampiharana manokana dia hanampy ny ray aman-dreny be fiahiana mba hahatonga ny lahatenin'ny zaza ho madio sy tsara tarehy.
Torohevitra sy fampiofanana momba ny fomba hampianarana ankizy iray hanonona ny taratasy "p" ao an-trano
Ny reny tsirairay dia afaka manao fanazaran-tena amin'ny zanany. Hanampy amin'ny fampivoarana ny sehatry ny fiteny izy ireo, ary koa ny fampivelarana ny fahazotoany. Hisy vokany tsara eo amin'ny kabary izany.
"Ny soavaly." Avelao ny zaza hikasika ny lelany ho any amin'ny vava ambony ary hikapoka azy, toy ny soavaly mihazakazaka. Izay rehetra te-hizara an'io biby mahafatifaty io. Tokony ho in-20 eo ho eo io fomba io.
"Mitefaka ny lelanao." Tokony hitsiky sy hitsikitsiky kely ny tendron'ny lela ilay zaza. Tokony averina in-10 izany.
"Torkia". Ilaina ny manolotra ny vombony hampiseho sarin-koditra feno herisetra. Mba hanaovana izany, tokony hanipy ny lelany avy eo am-bavanao ianao eo amin'ny nifinao sy ny molotra, ary manonona feo mitovy amin'ny "bl-bl." Mba hahazoana azy tsara, mila manomboka haingana ianao, mihamitombo tsikelikely.
The coachman. Tokony hiteny feo tahaka ny "TPD" ilay zaza, toy ny hoe miezaka manakana ny soavaly izy. Amin'io tranga io, rehefa miteny ny molotra "p" dia mila voatsikera mafy, ary ny feony dia ho marenina.
The Woodpecker. Avelao ny zaza handondona ny lelany ao ambadiky ny nifanila. Amin'izany fotoana izany dia tokony hiantso ny "dd-d" izy. Tokony hohafana ny vavany.
"Magpie". Ny ankizy dia manonona "trrrrrrrr" amin'ny lela natsangana ho an'ny alveoli (amin'ny toeram-pitsaboana - lavaka sigara, fahaketrahana eo amin'ny vala izay misy ny fakan'ny nify). Tamin'ny voalohany dia natao tamim-pahanginana ny fampiharana, saingy ny zava-drehetra dia miharatsy sy mihen-danja.
"Sokafy ny nifinao." Mientanentana be ilay zaza ary mandany ny lelany amin'ny ao anatiny. Ny valanorano ambany dia amin'izao fotoana izao tsy misy hetsika.
Avelao ny kely mba hanandrana hanatona ny orony amin'ny lelany. Mahafinaritra sy mahaliana. Afaka manao an'io amin'ny zaza io i Neny, izay mahatonga azy io hahaliana kokoa.
Ny fanatanterahana tsy ara-dalàna ny gymnastique manerantany dia hanampy ny ankizy hianatra ny fomba hitenenana ny taratasy "p", toy ny mpitsabo tenenina, ary ao an-trano miaraka amin'ny reniny.
Ho an'ny vokatra lehibe kokoa, mila manampy amin'ny asa atao any am-pianarana asa izay ho liana amin'ny ankizy any am-pianarana:
miteny ny tononkira , izay misy maro amin'ireny feo ireny;
Soraty amin'ny tenanao ireo teny miaraka amin'ny litera 2 "p" ary angataho ilay volombava, araka izay azo atao mba hamerenana azy ireo;
Ilaina ny manome soso-kevitra ny hilaza ny taratasy "d" matetika kokoa, satria manampy izany hampianatra ilay zaza hiteny "p" Ilaina ihany koa ny mamoaka teny izay misy ireto litera 2 ireto;
Ilaina ny mitadidy ny fampivoarana fahaizana matanjaka tsara, satria voaporofo ny fifandraisana amin'ny teny, noho izany dia ilaina ny miezaka ny manolotra tsy tapaka ny asa mifanaraka amin'izany.
Mitadiava valiny amin'ny fanontaniana hoe ahoana no fomba ampianarana ny ankizy iray hiteny ny taratasy "p" ao an-trano, ny ray aman-dreny dia tokony hahatsapa tsara fa ny fampiharana dia zava-dehibe, fa misy kosa ny nuance hafa. Tokony haniry hianatra ny ankizy. Tsy afaka manery ankizy iray hanao asa ianao. Ny tsara indrindra dia ny mandresy ny fampiasana rehetra miaraka amin'ny tombotsoan'ny rambony. Tokony ho 15-20 minitra ny lesona iray.
Ny teknikan'i Masaru Ibuki - taorian'ny fahatelo efa tara
Miantsoantso ny ankizy rehefa mitomany
Lalao an-trano ho an'ny ankizy
Manamboatra ny zorony ao amin'ny kilasy fianarana
Trampolina mavesatra ho an'ny ankizy ho an'ny trano fatoriana fahavaratra
Tetik'asa fampianarana ho an'ny ankizy 3 taona
Babies ho an'ny zazakely
Partha-transformer ho an'ny mpianatra
Fikambanana ho an'ny ankizy
Asa tanana ho an'ny Papa
Panties ho an'ny fampiofanana vilia
Ahoana ny fandehanana mijery avy amin'ny plasticine Smeshariki?
Nahoana no malahelo ilay kibo?
Fananganana avy amin'ny plastinina sy kesika
Hibiscus voninkazo - fitsipika tsotra mitombo ao an-trano
Fanaovana lactation matotra
Diet Kovalkova - sakafo tena tsara ho an'i Kowalkov - dingana telo
Taratasy ho an'ny malala ao amin'ny tafika
Sangisangy ho an'ny tarehy manodidina - 57 sary amin'ny safidy tsara indrindra
Hevitra ho an'ny sary mivoy sary
Perfume de Yamamoto
Totozy tsara tarehy ho an'ny zazavavy
Sakafo tsara ho an'ny isan'andro
Ny ronono dia tsara sy ratsy
Trano fonenana mandritra ny fahavaratra
Phobia - fahatahorana ambony
Toby 37 ho an'ny bevohoka
Ahoana no hanamboaran-tsolika mihinana henry?
FSH no nitombo